Iidesika ezi-6 zeOval Office: zisetyenziswa nguMongameli uDonald Trump, uBarack Obama, uJohn F. Kennedy, nabanye - Uyilo Lokuphefumlela
Eli bali lapapashwa okokuqala nge-1/19/2021; ihlaziyiwe ukubonisa ulwazi olutsha.
Nge-20 kaJanuwari, ukusungulwa kukaMongameli UJoe Biden yenzeke kumanyathelo e-United States Capitol -kwaye olu tshintsho lobunkokheli luza kuthotho lwezilungiso kwinto yokuhombisa yangaphakathi Indlu emhlophe . Okokuqala nokuphambili, u-Biden wakhetha ukuba yeyiphi kwezi tafile zintandathu zeOval Office kwiminyaka edlulileyo emfaneleyo kunye nombono wakhe ngeli gumbi linembali. Idesika yokhetho lukaBiden yile Sombulula idesika , apho uCaroline Kennedy noJohn F. Kennedy Jr. babehlala befihla ngaphakathi ngelixa utata wabo esemsebenzini-idesika efanayo esele isetyenzisiwe kwiOval Office ngabaongameli abasibhozo bebonke, kubandakanya u-Barack Obama no-Donald Trump. Apha ngezantsi, Indlu entle ujonga zonke iidesika zeOval Office.
Itheyibhile yeTheodore Roosevelt
Uvimba weSizwe noLawulo lweeRekhodi
Nangona le tafile yayenzelwe uMongameli welo xesha u-Theodore Roosevelt ngo-1903, ayizange ingeniswe kwiOval Office de kube ngu-1909, xa yayisetyenziswa nguMongameli uWilliam Howard Taft — kwaye yayihlala kule ndawo ibalulekileyo de kwade kwafika umlilo weWest Wing wowe-1929. Kwiminyaka kamva, uHarry S. Truman wazisa oku kugcinwa kugcino ukuze iphinde isetyenziswe kwakhona. Abanye oomongameli abasebenzise le tafile baquka uWoodrow Wilson, uWarren G. Harding, uCalvin Coolidge, uHerbert Hoover, kunye noDwight D. Eisenhower.
Uhlobo oluphezulu lwenja
Ithala leencwadi likaMongameli waseFranklin D. Roosevelt
Emva komlilo weWest Wing, iOval Office yashiywa yonakele — yiyo loo nto ifuna iimpahla ezintsha. Iqela labenzi befenitshala abavela eGrand Rapids, eMichigan, banikele ngedesika entsha ukuze uMongameli uHebert Hoover ayisebenzise, ​​kwaye yahlala kwiOval Office nasemva kokuba indawo ihlaziyiwe. Le tafile yasetyenziswa kamva ngu-Franklin Delano Roosevelt -kwaye ngoku iboniswa e-Franklin D. Roosevelt Library kaMongameli nase Museum e-Hyde Park, eNew York.
Inkqubo ye- Sombulula Idesika
Inkqubo ye- Sombulula Idesika yenziwe ngamaplanga e-oki awayekade eyinxalenye ye-HMS Sombulula , inqanawa yaseBritane Royal Navy. UKumkanikazi uVictoria wanika le tafile kuRutherford B. Hayes ngo-1880 njengendlela yokubulela ngokuhlangula nokubuyisa inqanawe emva kokuba yashiywa ngo-1854 ngethuba kukhangelwa umhloli wamazwe waseArctic uSir John Franklin.
Ngokuqinisekileyo eyona foto idumileyo ye- Sombulula Idesika yile apho uJohn F. Kennedy omncinci omncinci edlala ngokufihla ngaphakathi komnyango obiyelweyo ngaphambili edesikeni. Into uninzi olunokuthi lungayazi kukuba lo mnyango wongezwa kuFranklin Delano Roosevelt njengendlela yokufihla imilenze yomntu awayeyisebenzisa ngexesha lomlo nepoliyo. Ngelishwa, olu longezo aluzange lugqitywe kude kube kwiinyanga ezilandela ukusweleka kukaRoosevelt, ngenxa yoko akazange akwazi ukusebenzisa eli nqaku.
Inani elipheleleyo labongameli abasibhozo basebenzise i Sombulula Idesika kwiOval Office: UJohn F. Kennedy, uJimmy Carter, uRonald Reagan, uBill Clinton, uGeorge W. Bush, uBarack Obama, uDonald Trump noJoe Biden.
ILayibrari kaMongameli yeLBJ
Idesika kaJohnson kuphela kweOval Office enikezela ngokusetyenziswa ngumongameli omnye. Njengoko igama layo libonisa, idesika likaJohnson lalisetyenziswa nguMongameli uLyndon B. Johnson, ukuqala ngexesha lakhe elichithwe njengeSenator yaseMelika. Ngoku ibekwe kwilayibrari yaseLyndon Baines Johnson kunye neMyuziyam eAustin, eTexas.
IThala leeNcwadi leCongress
Nangona kwakukhe kwakholelwa ukuba uSekela Mongameli uHenry Wilson uyayisebenzisa le tafile, kamva kwagqitywa, kodwa igama elithi ‘Wilson desk’ lisasetyenziswa ukubhekisa kule fenitshala. Owayesakuba ngumongameli uRichard Nixon noGerald Ford basebenzise le tafile ngexesha lobongameli babo — kwaye uNixon wayisebenzisa okokuqala ngexesha lakhe njengesekela mongameli.
Idesika yeC & O
UGeorge HW UBush kuphela komongameli osebenzise i-C & O idesika kwiOval Office. Abanye oomongameli basebenzise oku kunikezela, kodwa kuphela kwi-West Wing Study-abo mongameli yayinguGerald Ford, uJimmy Carter, noRonald Reagan. Le tafile yenziwa okokuqala ngo-1920, kubanini be-Chesapeake kunye ne-Ohio Railway, kodwa kamva yanikezelwa kwi-White House.
Uyilo lwangoku lwesiqithi sekhitshi
Ihalloween yeefestile zokuhombisa diy
flip okanye flop el moussa
Inkqubo yemibala yegumbi lokuhlala